Sida loo isticmaalo kiniinka ilmo iska soo ridka, tilmaamaha
HowToUse waa bulsho onlayn ah oo ay maamulaan shakhsiyaad aad ugu heelan kuwaas oo rumaysan in dhammaan haweenka iyaddoon loo eegin halka ay ku noolyihiin, ay helaan doorashada ilma soo ridka badbaadada ah.
HowToUse waxay u shaqaysaa si ay u wadaagto xaqiiqooyinka iyo goobaha ku saabsan kiniinka ilma soo ridka- waxa laga fekerayo ka hor, halka laga helo kiniinka ilma soo ridka tayada leh, waxa la filayo, iyo marka la raadinayo caawimada caafimaadka haddii ay lama huraan tahay. Halkan waxaan u joognaa inaan ku qalabayno haweenka macluumaadka ay u baahanyihiin si ay si wanaagsan uga gooshaan ilma soo ridka qaabka shuruudahooda leh.
Halka aanKa Shaqayno
HowToUse waa hay’ad caalami ah- waxaan halkan u joognaa inaan siino macluumaad dumarkaiyo ilaha laga heli aduunka oo dhan. Waxaan hadda websaydkayaga loo turjumay 30 luuqadood.Ma u baahantahay luqad aanad arag ? nagala soo xidhiidh info@howtouseabortionpill.org
Dadaal kasta oo la sameeyo si loo hubiyo in macluumaadka ku jira bogagga websaydka waa sax. Si kastaba ha ahaatee, waxa ku jira way isbadali waqti ilaa waqti iyo qorayaasha waxay aqbali karaan masuuliyada sax ahaanshaha macluumaadka lagu soo bandhigay waqti kasta oola siiyaa.
Adeegsiga adeegyadan, waxaad ku raacsan tahay dhammaan Shuruudaha Adeegga, sida loo cusbooneysiin karo annaga waqti ka waqti. Hubi boggan si joogto ah si aad u ogaato wixii isbeddel ah ee aan ku sameynay shuruudaha adeegyada.
Waxaan xaq u leenahay inaan ka noqonno ama aan wax ka beddelno Adeegyada ogeysiis la'aan Sabab kasta ha noqotee, haddii Websaydhkan aan la heli karin wakhti kasta ama xilli kasta, annagu masuul kama noqon doonno Waqti ka waqti, waxaan xaddidnaan karnaa helitaanka qaybo ka mid ah ama websaydhkan oo dhan.
Websaydhkan wuxuu ku koobnaan karaa xiriiriyeyaal websaydhyada kale ("bogagga iskuxiran"), oo aysan ka hawlgelin www.howtouseabortionpill.org Websaydhkani ma laha wax xakameyn ah oo ku saabsan Goobaha Isku-xidhka ah mana aqbalayo wax deyn ah iyaga ama wixii khasaaro ama waxyeelo ah ee ka dhalan kara isticmaalka adeegsiga degelladan Isticmaalkaaga Goobaha Xiriirinta waxay ku xirnaan doontaa shuruudaha isticmaalka iyo adeegga ku jira bog kasta oo ka mid ah.
Qaanuunka arrimaha gaarka ah ee noo gaarka ah, kaas oo qeexaya sida macluumaadkaagu u noqon doono aan isticmaalno waxaa laga heli karaa www.howtouseabortionpill.org/#privacy-policy. Adigoo adeegsanaya websaydhkan, waxaad ogolaatay in lagu sharaxo ay ku sharaxeyso iyada oo loo baahan yahay in dhammaan xogta ay bixiso ay sax tahay
Waa inaadan si khaldan u isticmaalin websaydhkan Ma yeeli doontid: inaad gasho ama aad dhiirrigeliso nooc kasta oo fal dambiyeed ah; Xiriirinta ama qeybinta fayraska sida Trojans, Gooryaanka, bambaanooyinka macquulka ah ama wixii kale ee waxyeello leh, farsamo ahaan waxyeello u leh, jebinta kalsoonida ama si kasta oo loo diido ama fisqi ah; Jabso qayb kasta oo adeegga ka mid ah; xog musuqmaasuq ah; Dhibaateynta isticmaaleyaasha kale; Ku xadgudubka xuquuqda lahaanshaha qof kale; U dir wixii xayeysiin ah ee aan loo baahnayn ama wax xayeysiin ah, oo badanaa loo yaqaan "spam"; Ama isku day inaad saameyn ku yeelato waxqabadka ama shaqeynta wixii astaamo kumbuyuutar ah adoo adeegsanaya Degelkan
Ku xadgudubka qodobkaan waxaa loo tixgelin doonaa fal dambiyeed waxaana www.howtouseabortionpill.org ay ku soo wargelin doontaa xadgudub kasta oo noocaas ah saraakiisha sharciga fulinta ee ay khuseyso oo ay u soo bandhigto aqoonsigooda iyaga.
Masuul kama noqon doonno wixii waxyeelo farsamo ee ka dhasha isticmaalkaaga degelkan, oo aan ku qaadno qalabkaaga kombiyuutarka, barnaamijyada kombiyuutarka, xogta ama waxyaabaha kale ee lahaanshaha leh, ee ay faafiyaan fayrasyada ama waxyaabaha kale ee farsamo ahaan waxyeellada u leh. Si aad u soo dejiso wax kasta oo lagu dhejiyay, ama degel kasta oo ku xiran halkaas.
Hantida aqooneed, softiweerka iyo waxyaabaha ku jira
Dhammaan xuquuqda hantida aqooneed (oo ay ku jiraan sawirrada sawirrada leh) ee lagaa heli karo boggan ama u sii marinaya degelkan ayaa ah hantida www.howtouseabortionpill.org ama shati bixiyaasheeda waxaana ilaaliya sharciyada xuquuqda daabacaadda iyo heshiisyada adduunka oo idil. Dhammaan xuquuqda noocan oo kale ah waxaa iska leh www.howtouseabortionpill.org iyo shatiyeyaasheeda. Waad kaydin kartaa, daabici kartaa oo soo bandhigi kartaa waxyaabaha lagu bixiyay oo keliya si aad ugu isticmaasho shaqsi ahaan. Laguuma oggola inaad daabacdo, wax ka beddesho, qaybiso, ama haddii kale aad dib u soo saarto mid ka mid ah agabyada ama nuqulada lagu siiyay qaab kasta ama ka muuqda websaydhkan mana lihid ganacsi ama ganacsi ganacsi Waxaa laga yaabaa inaad u isticmaasho waxyaabahaas oo kale xiriir.
Afeef ee Mas'uuliyad
Dhammaan waxyaabaha ku jira iyo walxaha laga helo websaydhka waxaa loogu talagalay macluumaad guud, wada hadal guud, iyo waxbarashada oo keliya. Waxa ku jira ayaa la bixiyaa "sida ay tahay," isticmaalkaaga ama ku tiirsanaantaada qalabkaas oo keliya ayaa qatar kuu ah.
Hoos maya duruufo ​www.howtouseabortionpill.org ayaa mas'uul ka noqon doona wixii khasaaro ama dhaawac ah nooc kasta ha ahaadee, oo ay ku jiraan dhaawaca shaqsiyeed, taasoo ka dhalaneysa waxyaabaha lagu soo daabacay websaydhka ama is-dhexgal kasta oo u dhexeeya dadka isticmaala websaydhka, ha ahaato khadka tooska ah ama khadka tooska ah
Ku xirnaanta Website-kan
Waxaad ku xiri kartaa boggayaga guriga, oo aad ku siiso si aad sidaas u yeelatid qaab cadaalad ah oo sharci ah oo aan waxyeelaynin sumcadeena ama aad ka faa'iideysaneyso, laakiin waa inaadan sameynin xiriir si aad u sameyso isku xirka qaab kasta oo urur ah , oggolaanshaha ama oggolaanshaha qaybteenna halka aan qofna uusan ka jirin. Waa inaadan ka saarin xiriir websaydh kasta oo aadan adigu iska lahayn Websaydhkan waa inaan la qaabeyn karo goob kale, ama ma abuuri karto xiriiriye qayb kasta oo ka mid ah degelkan oo aan ahayn bogga guriga. Waxaan xaq u leenahay inaan ka laabano ogolaanshaha isku xirka ogeysiis la'aan.
Afeef la xiriirta lahaanshaha calaamadaha ganacsiga, sawirada shaqsiyaadka iyo xuquuqda daabacaadda saddexaad
Marka laga reebo halka si cad loogu sheegay dadka oo dhan (oo ay ku jiraan magacyadooda iyo sawirradooda), astaamaha saddexaad iyo astaamaha, adeegyada iyo / ama goobaha lagu soo bandhigay Websaydhkan sinnaba ugama la xidhiidha, ku xidhan ama xiriir la leh www.howtouseabortionpill.org waana inaad kuma tiirsanaan jiritaanka xiriir noocaas ah ama ku xirnaan. Wixii astaan ​​ah oo astaan ​​ah / magacyo lagu soo bandhigay websaydhkan waxaa iska leh milkiilayaasha sumadaha ganacsiga Halkaas oo calaamad ganacsi loo adeegsado ama magaca astaanta loo isticmaalo oo loo isticmaalo kaliya si loo sharaxo ama loo aqoonsado badeecada iyo adeegyada oo aan sinaba u sheegno in waxyaabahaas oo kale ay ansaxiso ama ku xidhan tahay www.howtouseabortionpill.org
Waxaad ogolaatay inaad magdhaw ka bixiso, difaacdo oo aad hayso dhib la'aan www.howtouseabortionpill.org, agaasimayaasheeda, saraakiisheeda, shaqaalaheeda, la taliyayaasheeda, wakiiladeeda, iyo kuwa la shaqeeya, cidkasta iyo dhamaan sheegashooyinka kooxda sadexaad, masuuliyada, waxyeelada iyo / ama kharashyada (oo ay ku jiraan, laakiin aan xadidnayn) ilaa, khidmadaha sharciga) ee ka dhashay adeegsiga degelkan ama jebinta Shuruudaha Adeegga.
www.howtouseabortionpill.org waxay xaq u lahaan doontaa ikhtiyaarkeeda saxda ah wakhti kasta oo ogeysiis la'aan ah in wax laga beddelo, laga saaro ama la beddelo Adeegyada iyo / ama bog kasta oo ka tirsan degelkan.
Haddii qayb ka mid ah Shuruudaha Adeegga aan la dhaqangelin karin (oo ay ku jiraan qodob kasta oo aan uga reebnay waajibaadkayaga xaggaaga) dhaqangelinta qayb kasta oo ka mid ah Shuruudaha Adeegga ma saameyn doonto. Dhammaan qodobbada kale waxay ku sii jiraan xoog iyo saameyn buuxda. Ilaa iyo inta suurtagal ah halka qodob kasta / qodob-hoosaad ama qayb ka mid ah qodob / qodob-hoosaad loo jarin karo si qaybta hadhay ay u noqoto mid ansax ah, qodobka ayaa loo fasirayaa si waafaqsan. Haddii kale, waad oggoshahay in qodobka la saxo oo loo fasiro hab aad ugu eg macnaha asalka ah ee qodob / qodob-hoosaad sida sharcigu oggol yahay.
Waxaan ku shaqeynaa nidaamka wax ka qabashada cabashooyinka oo aan u adeegsan doonno inaan isku dayin inaan xallinno khilaafaadka markii ay soo baxaan marka hore, fadlan na soo ogeysii haddii aad wax cabasho ama faallo ah.
Haddii aad jebiso shuruudahan mana qaadano wax talaabo ah, waxaan xaq u yeelan doonnaa weli waxaan xaq u lahaan doonnaa inaan u isticmaalno xuquuqdeena iyo dawadeena xaalad kasta oo kale oo aad jebiso shuruudahaan.
Shuruudaha Adeegga ee kor ku xusan waxay ka kooban yihiin dhammaan heshiisyada dhinacyada waxayna meesha ka saarayaan mid kasta iyo heshiisyadii ka horreeyay iyo kuwa aan caadiga ahayn ee u dhexeeya adiga iyo www.howtouseabortionpill.org. Tanaasul kasta oo ka mid ah qodob kasta oo ka mid ah Shuruudaha Adeegga waxay dhaqan geli doontaa oo keliya haddii qoraal ahaan uu u saxiixo Agaasime ka ah www.howtouseabortionpill.org.
www.howtouseabortionpill.org way fahmaysaa oo qiimeeyaan asturnaanta qof kasta oo soo booqanaya websaydhka oo kaliya ayaa aruurin doona oo u adeegsan doona macluumaadka adiga iyo qaab si joogto ah xuquuqdaada iyo waajibaadkayaga sharciga.
Nidaamkani wuxuu khuseeyaa mid kasta iyo dhammaan macluumaadka aan soo ururinay ee la xiriira isticmaalkaaga Websaydhkeenna Fadlan si taxaddar leh u aqri siyaasadan qaaska ah oo hubi inaad fahanto .. Aqbalidaada siyaasaddeena asturnaanta waxaa loo arkaa dhacaan inuu ka dhaco adeegsigaaga ugu horreeya ee websaydhkeena Haddii aadan aqbalin oo aadan ku raacsaneyn Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah, waa inaad si deg deg ah u joojisaa adeegsiga Websaydhadeena.
Siyaasadani Waxay Daboolaysaa
Tani Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah wuxuu khuseeyaa oo keliya isticmaalkaaga Kuweena websaydhka. Uma fidineyso shabakado kasta oo ku xiran websaydhkeena (haddii aan bixinno xiriirradaas ama haddii ay wadaagaan isticmaaleyaasha kale) Annagu ma lihin xakameyn sida xogtaada loo ururiyo, lagu keydiyo ama loo isticmaalo bogagga kale ee websaydhyada kale waxaanan kugula talineynaa inaad hubiso siyaasadaha gaarka ah ee websaydhada noocaas ah ka hor intaan wax xog ah siin.
Xog Aan Uruurinay
Xogtaada Guud waxaa si otomaatig ah u ururin doona Websaydhkeena. Hoos waxaa ku xusan waa xogta guud ee loo qaadi karo si otomaatig ah asturnaanta
Cinwaanka IP-ga iyo goobta
nooca biraawsarka webka iyo nidaamka qalliinka nooca
Liistada URLs ee ka bilaabata websaydhka tixraaca, hawshaada waxqabad websaydhkeena
Annagu ma soo aruurinno wax xog shaqsiyan ah oo la garan karo oo mustaqbalka ah haddii aan damacsan nahay inaan aruurinno isla markaa markaa waxaan qaadan doonnaa dadka isticmaala si iskood ah u oggolaanaya.
Sideen U Isticmaalnaa Xogtaada?
Dhammaan xogta guud waxaa lagu keydiyaa si ammaan ah iyadoo la raacayo Xeerka Ilaalinta Xogta Guud ee Midawga EU (GDPR). Waxaan u isticmaalnaa macluumaadkaaga si aan u siino adeegyada ugu fiican ee suurtagalka ah adiga. Tan waxaa ka mid ah
A.1. Bixinta iyo maaraynta marinkaaga Shabakaddayada
A.2. Shakhsiyeynta iyo ku habboonaanta khibradaada Websaydhkeena
A.3. Falanqaynta Adeegsigaaga websaydhka [iyo soo-aruurinta jawaab-celinta] si aan awood ugu siino inaan si joogto ah u horumarino Boggeena internetka iyo khibradaada isticmaale
Xaaladaha qaarkood, aruurinta xogtu waxay noqon kartaa qaanuun ama shuruudo qandaraas.
Waxaan qaadi doonnaa dhammaan tillaabooyinka macquulka ah si aan u hubinno inaan si buuxda u ilaalino xuquuqdaada oo aan u hoggaansanaano waajibaadyadeena hoosta GDPR iyo shuruucda kale ee laxiriira.
Sidee iyo Xagee u keydinaa Xogtaada?
Sidan oo kale, waxaan sii haysannaa xogta guud ilaa uu isticmaaleyaashu si gaar ah u codsanin inay tirtiraan. Dhacdo kasta, waxaan sameyneynaa dib u eegis sanadle ah si aan u hubino haddii aan u baahanahay inaan ilaalino xogtaada. Xogtaada waa la tirtiri doonaa haddii aanan mar dambe ugu baahanayn iyada oo la raacayo shuruudaha Siyaasadeena
Qaar ama dhammaan xogtaada waa la keydin karaa ama loo wareejin karaa meel ka baxsan Aagga Dhaqaalaha Yurub ("EEA") (EEA waxay ka kooban tahay dhammaan waddamada xubnaha ka ah EU, oo lagu daray Norway, Iceland iyo Liechtenstein). Waxaa loo arko laguu arkaa inaad aqbashay oo aad ku oggolaato tan adoo adeegsanaya websaydhkeena oo aad noo gudbineyso macluumaad. Haddii aan wax kaydno ama u wareejino xogta ka baxsan EEA, waxaan ku qaadaneynaa dhammaan tillaabooyinka macquulka ah si aan u hubinno in xogtaada loo daaweeyo si nabadgelyo ah oo aamin ah sida ay u noqon doonto ETA iyo GDPR-da. Tallaabooyinka noocan oo kale ah waxaa ka mid noqon kara, laakiin aan ku xaddidnayn, adeegsiga shuruudo qandaraas oo sharci ahaan waajib ku ah innaga iyo cid kasta oo saddexaad oo aannu ku lug yeelano. Ilaaliyo loo adeegsaday waa:
B.1. Xogta si aamin ah ayaa loogu gudbiyaa habka borotokoolka SSL loo duubay,
B.2. Xogta si badbaado leh ayaa loogu kaydiyaa Heroku Servers oo ku yaal Mareykanka
Lyadoo aan loo eegin tallaabooyinka amniga ee aan qaadno, waxaa muhiim ah in la xusuusto in ku gudbinta xogta ee internetka laga yaabo in aysan gabi ahaanba ammaan ahayn oo waxaa lagugula talinayaa inaad qaaddo taxaddarro habboon marka aad noogu soo gudbineyso xogta internetka
Ma Wadaagnaa Xogta ada?
Waxaan la wadaagi karnaa xogtaada ururkayaga haya iyo kuwa hoosaadyo yimaada.
Waxaan qandaraas la geli karnaa dhinacyada saddexaad si aan kuu siino adeegyo hufan. Kuwaas waxaa ka mid noqon kara xarumaha mashiinka raadinta, Google falanqaynta, xayeysiinta iyo suuq geynta. Xaaladaha qaarkood, dhinacyada saddexaad waxay u baahan karaan marin u helka qaar ama dhammaan xogtaada guud. Halkaasoo mid ka mid ah macluumaadkaaga loo baahan yahay ujeedadaas oo kale, waxaan qaadan doonnaa oggolaanshahaaga oo aan u qaadaneynaa dhammaan tillaabooyinka macquulka ah si aan u hubinno in xogtaada si fiican loo maareeyo si amaan ah, iyo iyada oo la raacayo xuquuqdaada, iyo waajibaadkayaga saddexaad xisbiga ka hooseeya sharciga Waxaan hada qandaraas kula jirnaa:
Xogta la shaaciyay
Google Falanqaynta Hel tirakoob ku saabsan saameynta iyo dhagaystayaasha Google waxay leedahay bog u gaar ah faahfaahintaas: https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=en
Waxaan isku soo uruuri dayey karnaa tirakoobka ku saabsan adeegsiga websaydhkeena oo ay ku jiraan xogta ku saabsan taraafikada, qaababka isticmaalka iyo macluumaadka kale. Waxaa laga yaabaa inaan waqti ka waqti la wadaagno xogtaas oo ay weheliso dhinacyada saddexaad. Xogta waxaa la wadaagi doonaa oo keliya oo loo isticmaali doonaa xuduudaha sharciga.
Xaaladaha qaarkood waxaa suuragal ah in si sharci ah looga baahnano inaan la wadaagno xogta qaarkood ee uu nagu haysto, tusaale ahaan, meesha aan ku lug leenahay dacwadaha sharciga, halkaas oo aan u hoggaansameyno shuruudaha sharciga, amar maxkamadeed, amar maxkamadeed, ama hay'ad dowladeed. Uma baahnin oggolaansho dheeraad ah oo adiga kaa ogow si aad ula wadaagtid xogtaada xaaladahaas oo kale oo aad u hoggaansami doontaan sida loogu baahan yahay codsi kasta oo sharci ahaan nagu yahay.
Waxaan shaqaaleysiinaa qaabab farsamo oo munaasib ah iyo habraacyada amniga caadiga ah iyo habraacyada si aan u ilaalino sirta macluumaadka isticmaaleyaasha Haqaalaheenna, wakiiladeenna iyo la-hawlgalayaasha, wax walba ku samee wax kalmata ay macquul tahay si ay u ilaaliyaan macluumaadkaaga.
Gudaha, marin u helka dhammaan macluumaadka isticmaaleyaasha ayaa lagu xadiday kuwa u baahan marin u helida si ay u gutaan waajibaadka shaqadooda waxayna galeen heshiis qarsoodi ah.
Xaqa Aad u Leedahay Ka Reebidda iyo La Noqoshada Macluumaadka
Si aad u isticmaasho dhammaan astaamaha iyo howlaha laga heli karo websaydhkeena waxaa laga yaabaa in lagaa rabo inaad soo gudbiso ama u oggolaato aruurinta xog gaar ah.
Sideed u heli kartaa xogtaada?
Waxaad xaq u leedahay sharci inaad weydiisato nuqul ka mid ah macluumaadkaaga shaqsiyeed ee uu nagu haysto. Fadlan Nagala soo xiriir si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah oo ah privacy@howtouseabortionpill.org
Ma isticmaalnaa Kukiyada?
"Kukiyada" waa qaybo yar oo macluumaad ah oo ay websaydh ku dhejisay kombiyuutarkaaga darawgiisa adag. Kukiyada kaa ururin wax macluumaad xasaasi ah oo shaqsiyeed ka adiga. Waxaan u isticmaalnaa cookies si aan u falanqeeyo xogta ku saabsan taraafikada shabakadeenna, taas oo naga caawisa keydinta waxyaabaha aad doorbidayso ee booqashooyinkaaga mustaqbalka. Tani waxay noo oggolaaneysaa inaan habeyno websaydhka iyadoo loo eegayo danahaaga, taas oo noo suurtogelinaysa inaan gaarno adeegyo dheeraad ah shaqsiyeed. Waad dooran kartaa inaad aqbasho ama diido buskudka Fadlan la soco in adiga oo hoos u dhacayaa ah kuyaala cookies-ka laga yaabo inaadan u adeegsan karin websaydhkayaga ah awooddeeda buuxa.
Websaydhkeenna ayaa adeegsanaya Google falanqaynta, Piwik iyo Vimeo si ay u aruuriyaan oo falanqeeyaan tirakoobka adeegsiga, taas oo noo oggolaanaysa inaan si fiican u fahamno sida dadku u adeegsadaan bartayada internetka. Isticmaalkayaga iyaga wax khatar ah uma keeno asturnaantaada ama si nabdoon u adeegsigaaga degel. Waxay noo suurta gelineysaa inaan si joogto ah u hagaajino Websaydhadeena, taasoo ka dhigaysa khibrad fiican oo waxtar kuu leh.
Ku xidhan Websaydh
Websaydhkan waxaa ku jiri kara xiriiriyeyaal bogag kale. Fadlan la soco in aanaan mas'uul ka ahayn dhaqamada asturnaanta ee websaydhada kale ee noocan ah Waxaan ku dhiirrigelinaynaa isticmaalayaasha inay ka warqabaan markay ka baxayaan Websaydhkan iyo inay akhriyaan bayaannada asturnaanta ee degel kasta oo ay booqdaan. In kasta oo aan si taxaddar leh u dooranayno websaydhada si aad ugu xirayaan, ogeysiiskan asturnaanta wuxuu quseeyaa oo keliya macluumaadka laga soo aruuriyay websaydhkeena.
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid websaydhka ama siyaasadan qaaska ah, fadlan nagala soo xiriir emayl ahaan astaanta asturnaanta@couseabotionpill.org
Fadlan hubi in su'aashaadu ay cadahay, gaar ahaan haddii ay tahay codsi macluumaad ku saabsan xogta aan kaa hayno.
Isbeddelka ku yimaada siyaasadeena qaaska ah
Waxaan u badali karnaa Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah maadaama aan u aragno inay lagama maarmaan tahay waqti ka waqti, ama sida sharcigu u baahan yahay. Wixii isbeddelo ah waxaa isla markiiba lagu dhejin doonaa websaydhkeena waxaana loo qaadan doonaa inaad aqbashay shuruudaha siyaasada gaarka ah ee isticmaalkaaga ugu horreeya ee Websaydhkeenna ka dib isbeddelada. Waxaan kugula talineynaa inaad si joogto ah u fiiriso boggan si joogto ah si aad u ilaaliso illaa iyo-ka-dhaca.
Ipas waa hay'adda kaliya ee caalamiga ah oo si kali ah diirada saara balaarinta marin u helka ilmo iska soo ridka iyo daryeelka ka hortagga uurka. Mawduuca ku saabsan HowToUseAbortionPill.org wuxuu la jaan qaadayaa Akhbaaraadka Caafimaadka Taranka ee 2019 oo ay soo saartay Ipas.
The World Health Organization (WHO) waa hay'ad gaar ah oo ka tirsan Qaramada Midoobay oo u qaabilsan caafimaadka bulshada caalamiga ah. Waxyaabaha ku jira HowToUseAbortionPill.org waxay la jaanqaadayaan ilma iskasoo rididda nabdoon ee 2012: hagitaan farsamo iyo siyaasad nidaamyo caafimaad oo ay sii deysay WHO.
DKT International waa urur diiwaangashan, oo aan faa'iido doon ahayn oo la aasaasay 1989 si diirada loogu saaro awooda suuq geynta bulshada qaar ka mid ah wadamada ugu waaweyn oo leh baahiyaha ugu weyn ee qorsheynta qoyska, kahortaga HIV/AIDS iyo ilmo iskasoo ridid aamin ah.